Semalt E-Commerce SEO Package - iyo Yakakwana Tozi Yokuburitsa Trafiki
Seye SEO uye yekushambadzira chikuva, Semalt yakagadzirirwa nemasevhisi akati wandei, ese ayo anogona kubatsira kune yako e-commerce bhizinesi. Iwe uri iwe wemamwe emakambani e-commerce emakambani kunze uko? Iwe uri kutsvaga mushandi akavimbika webasa rinovimbisa rakakura organic traffic kune webhusaiti yako? Zvakanaka, kutsvaga kwako kuchangopera. Pano paSemalt, tinosangana nezvako zvese zvaunoda SEO. Kuti uwane zvimwe nezve masevhisi edu, unogona kudzvanya pano.
Semunhu webhizinesi uye muzvinabhizimusi, tinonzwisisa kurwadziwa kwako kana iwe ukaisa mukuedza kwako, asi hapana munhu wekuikoshesa. Tinokubatsira kuisa yako kambani uye mabhizinesi chinzvimbo chepamusoro ekutsvaga nzvimbo, uye tinokuchengeta iwe uripo.
Masevhisi edu aisazopa nechikamu chepizi kana pitsa yako yakanaka; tinogara tichikupai zvidimbu — nenzira iyi iwe hausi akanakisa kwezuva, vhiki kana mwedzi. Chero bedzi iwe uchibatana nesu, timu yedu ichaenderera nekuongorora webhusaiti yako uye nekukwiridzira huwandu hwayo. Tichakupa rwizi rwakasimba rwemigwagwa iyo inobatsira kutengesa kambani yako.
Kuti ufambise bhizimusi rakabudirira e-commerce nhasi, iwe unoda yakawanda uye yakawanda traffic kune webhusaiti yako. Asi izvo hazvina kukwana; iwe unodawo iwo mabhatani kuti ugare, kufamba kune yako saiti uye kutsvaga masevhisi kana zvinhu zvavanoda.
Saka chii icho webhusaiti yako chaizoda kukwanisa kubvisa kubva kune izvi uye kukuunza iwe unopenga purofiti, saka mhinduro iri nyore-Semalt e-commerce SEO package.
Chakavanzika chedu chiri mukugona kwedu kuburitsa zvinoshamisa organic traffic. Ndinotenda kuti wakambonzwa nezveSEO, asi kana usiri kunetseka; tine chinyorwa chakanakira iwe. Iko kuverenga nekukurumidza uye kuri nyore uko kunokusimudza kuti umhanye pasina nguva. Dzvanya apa kuti udzidze izvo zvekutanga zveSEO.
Kana iwe uchiziva neSEO, iwe unoziva kuti organic traffic haina kufanana nehumwe humwe kushambadzira webhusaiti yako. Kwete chete iwe unowana "akatendeka" mabhatani, asi zvakare ndeye mahara zvachose. Sebhizimusi nyowani, tinonzwisisa kuti kuuya netsoka dzako hazvitombove nyore. Kuvaka hukama, kurwisa imbwa huru uye kubhadhara kune zvese zvaunoda kunogona kuoma. Izvi zvinobva zvaita kuti zvisave pedyo newe kuti ubhadhare pamabhadharo akabhadharwa pane injini dzekutsvaga.
Kunyangwe iwo masevhisi akabhadhara akakuwanira mabhatani nekukasira, chii chichaitika kana iwe uchinge wapererwa nemari yekuvabhadhara? Unogona here kuvimbisa kuti saiti yako ichachengetedza chinzvimbo icho? Ichi ndicho chikonzero organic SEO inotyairwa traffic ndiyo yakanyanya kunaka. Ne organic traffic, iwe unoziva kuti yako webhusaiti haina kuiswa nekuda kwekuti iwe uri kubhadhara iyo, asi iwe unoziva kuti yako E-commerce SEO iri kushanda mumamiriro epamusoro.
Nekudaro, kazhinji kazhinji kwete kudaro, e-commerce varidzi vemabhizinesi havakwanisi kushandisa izvo zvakanaka zveSEO. Ivo havana chokwadi chekuvaka mapeji ekutakura, nezvedu mapeji kana sevhisi / mapeji ebhizinesi rekugadzira. Ichi chinhu chine chekuita nekuparadza mabhizinesi mazhinji aive aine kugona kukuru. Pasina ruzivo uye hunyanzvi hwekukwevera traffic, yako webhusaiti inoramba yakanyarara kuunganidza cyber guruva.
Kusvikira iwe uchigona kuwana yako SEO iko, kuwedzera yako yekushambadzira bhajeti haingaiti zvakanaka iwe. Iko hakuna nzira iwe yaunoshanyira saiti isina zvinonakidza zvemukati uye ugare. Asi pane nzira yekubuda nayo. Kana iwe uchinzwa sekunge uri kurovera madziro kana iwe uchiedza kukwezva traffic kune yako saiti, iwe unoda nyanzvi yekubata. Uye kusiyana nemamwe akawanda mawebhusaiti, isu tinokwanisika, tine ruzivo uye tinokuisa pekutanga.
Kukupa iwe zvakanakisa, timu yedu inosanganisira vehupfumi, vatsvaguri, vanyori, uye inyanzvi iyo inoona kuti zvese zvaunoda uye izvo zvewebsite yako zvinosangana. Nenzira iyi, hapana anomira mukana wekukurova kumusoro.
Inoshanda E-commerce SEOs ruzivo iwe rwaunogona kushandisa kuti uwane chinzvimbo
Tisati tatanga kugovera mamwe matipi, tavandudza aya matipi kubva pakutsvaga kwakawanda pamusoro pekuti isu mawebhusaiti edu aripo sei, maonero emusika, maitiro aripo uye maitiro akanakisa. Usati waedza chero eapi eaya matipi iwe pachako, tinoda kutsanangura kuti webhusaiti yese yakasarudzika uye inokosha. Izvi zvinoreva kuti hapana vimbiso yekuti izvi zvichakushandira. Kuti uwane zvakanakisa, unoda zvakanakisa. Tora timu yedu yehunyanzvi kuti ipfuure neyako saiti uye uipe iyo yekubata kubata.
Iwe pachako, chero shanduko dzaunoita kuwebhusaiti yako dzinofanira kuitwa nekungwarira kwakanyanya.
Rega injini dzekutsvaga dziverenge ongororo pane yako saiti
Imwe yedzakanakisa nzira dzekukwezva vatengi vatsva ndeyokuita kuti zvinotaurwa nevashandisi vekare zviratidzike kwavari. Izvi zvinowedzerawo kuvonekwa kwako neruzivo rwakasarudzika pane yako tsananguro peji. Hapana munhu anoda kutenga kubva kumutengesi asina kuongororwa. Nevakawanda vatengesi vepamhepo online, iwe unofanirwa kuvaka kuvimba vasati vatengi vanogona kufambisa mabasa ako. Zvidzidzo zvakaratidza kuti pamusoro pe90% yevanoshandisa internet vanovimba vatengi ongororo. Nekuratidza wongororo dzako pamajini ekutsvaga, vatengi vanonzwa pakarepo kuvimba nezve yako saiti uye chigadzirwa icho. Zvadaro, ivo havazove nedambudziko rekushanyira webhusaiti yako kuti akubude kunze.
Kutarisa izvi kuongorora zvakare kwakanakira e-commerce SEO kuedza. Ongororo-dzakapfuma ongororo dzinotaura ako masevhisi uye mamwe SEO mazwi makuru ayo achiri kuratidzira pane yako saiti. Google inoziva izvi, uye webhusaiti yako inomira mukana uri nani wekusvika kunzvimbo yepamusoro.
Imwe yakanaka yekufunga kwevatengi ndeyekuti ivo vanopa vatengi maonero. Izvi zvakakwana nekuti ivo vanotaura kune izvo zvakanaka izvo zvaunopa kubva kune yakasarudzika maonero.
Nehurombo, imwe saiti inoratidza idzi ongororo nenzira iyo injini dzekutsvagira dzisingagoni kuzviverengera. Kunyangwe mawebhusaiti ari kugadzira kuverenga iwo mawebhusaiti akaiswa jekiseni, zviri nani kuti urege kumirira kuti agone.
Gadzira Dynamic Meta Tsananguro
Tsananguro yako yeMeta ndiko kupfeka kwako chero musangano. Zvinoratidzika sei zvinofunga kuti mitezo yako yedare inotora sei. Jira rakakoromoka rine tende rakakombama haikupi iwe chibvumirano. Kana injini dzekutsvaga dzikaratidza mhedzisiro pamhepo, ivo vanowedzera zvishoma kunyora pasi pemusoro wenyaya kana webhusaiti vachitsanangura zvauchawana kana ukabaya chinongedzo. Ndozvatinoreva so metadata. Metadata yako yakakosha pakuita kuti vashandisi vatarise bato rako kwete vamwe.
Kunyora rondedzero yemeta, pasina mazwi akakosha hakuna kunaka. Zvakafanana nekutarisa kushambadzira kusingataure chigadzirwa chavari kushambadza. Seye e-commerce bhizinesi inogara ichichinja zvigadzirwa zvaro, iyo meta rondedzero ichachinja nguva nenguva uye kutsvaga nzira yekuita kuti irambe ichipinda inogona kunetsa. Seyekambani diki iyi inodhonzera nguva nemikana yausina kuwanda ichi ndicho chikonzero mabhizinesi mazhinji anosarudza nyanzvi dzeSEO senge Semalt kuti avabatsire.
Pakupedzisira, simbisa yako metadata tsananguro yakasarudzika. Vaverengi vako vanoda kutenda kuti iwe wakasiyana uye wakasarudzika kunyangwe vasati vashanyira saiti yako.
Chengetedza tsanangudzo yako yezvigadzirwa yakasarudzika
Zvese zvakasarudzika zvave pekutanga kubva Google yaburitsa iyo Panda algorithm. Iyi algorithm inotarisa kusimudzira yakakwirira-yemhando yekutanga kutanga. Chinangwa chekuvandudza uku yaive yekuranga mawebhusaiti ayo anoteedzera zvirimo zvemamwe mawebhusayithi.
Imwe yedzakanakisa nzira dzekukurudzira webhusaiti yako ndeyakasarudzika uye SEO yakagadziriswa zvemukati. Izvi zvinokuisa iwe mune yakanakisa nzvimbo yekuonekwa uye vashanyi vako vanonzwa yakasarudzika manzwisisiro ayo anobatsira kutenga uye kukurudzira.
Kune varidzi vemawebhusaiti atovepo, zvine hungwaru kuti utarise saiti yako pane chero zvingaitwe zvakapetwa zviri mukati. Kana iwe ukaona chero, chinyorazve. Izvi zvinokupa mukana pane kukwikwidza kwako.
Shandisa schematic chiratidzo kumusoro
Schematic markup ndeimwe yezvishandiso zvakakosha kana uchibata ne eCommerce SEO. Zvinosuruvarisa, iyo inoramba iri imwe yezvishandiswa zvakanyanya E-commerce SEO. Aya madiki sniper anovandudza mhedzisiro yako nekuisa nyeredzi ratings uye mutengo tags zvakananga paGoogle. Wakaona here kuti unofarira kutenga kubva pamawebhusaiti iwe paunoona chigadzirwa nemutengo wacho ipapo pane peji reGoogle mhinduro? Icho chishandiso chakakosha chatinoshandisa kune ako webhusaiti.
Kunyange ichi chisiri chakananga chinzvimbo, urwu ruzivo runoratidzika runopa kuwedzera kukurudzira kune wese mushandisi kubaya pane yako link.
Nehunyanzvi hwedu kubata uye zvese izvi zvinonakidza maficha, hapana zvachose chikonzero nei iwe usingazodi isu kuti webhusaiti yako ive pamusoro yeGoogle chinzvimbo. Nguva zhinji, tinoedza nepatinogona napo kudzikisira mutengo asi zvichirasikirwa nei? Nekuva nerubatsiro rusina mutsigo, hausi kungopa webhusaiti yako zvakanakisa. Hapana munhu anogona kuita zvese asina kutumwa, uye nekuti isu tinodawo kubatsira mabhizinesi kukura, masevhisi edu anokwanisa kwazvo. Kana iwe uine chero mibvunzo, iwe unogona zvakare kubata nevatengi vedu vatengi ekuchengetedza kuno . Vanogara vakagadzirira kuendesa kune zvaunoda. Ivo vane hushamwari uye vangada kunzwa kubva kwauri saka usaramba. Ivo vachazopindura mibvunzo yako yese pamasevhisi edu kana SEO inoenderana mibvunzo. Tinotarisira kunzwa kubva kwauri.